August 2021 - Babal Khabar
Aug302021 by EditorNo Comments
आखिर कुन रोग हो यो ? जुन रोगले धमाधम कुखुराहरु मर्ने थाले
दैनिक १५ कुखुरा मर्ने गरेपछि किसानको कुखुरा फार्म खोल्ने धोको अधुरै रहने भएको छ । सिमकोट गाउँपालिका–७ को डाँडाफया गाउँमा रानीखेत र निमोनिया रोगले धमाधम कुखुरा मर्ने गरेपछि सो ठाउँका किसानको कुखुरा फार्म खोल्ने रहर अधुरै रहेको हो । लामो समयदेखि कुखुरापालन व्यवसायी गरी आर्थिक आम्दानी गर्ने स्रोत कुखुरापालन थियो तर किसानले जानकारी नै नपाएको रोग आएपछि आफ्नो व्यवसाय गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने योजना चौपट भएको स्थानीय किसान बाँचबहादुर सुनारले दुःखेसो पोख्नुभयो । सुनारले भन्नुभभयो,“सदरमुकाम सिमकोटसँगै जोडिएको वडा हुँदा पनि आफ्ना कुखुरा बचाउन नसकेको हो ।” उहाँका अनुसार मनग्य आम्दानी यही एउटा कुखुरापालन हो तर सोचेको काम पूरा नभएरै कुखुराको खोर रित्तो भएको छ । डाँडाफया– चार गाउँमा दुई हप्तादेखि उक्त रोगका कारण २०० बढी कुखुरा मरिसकेका छन् । तीन वर्षदेखि कुखुरापालन व्यवसाय गरेकोमा सबै कुखुरा सोही र
वि’वाह भएपछि यु’वतीहरु मोटाउनुको खास कारण यस्तो रहेछ
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका युवा यु’वती वि’वाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बि’हेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । वि’वाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनु’सन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार वि’वाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तै एक अन्य अनु’सन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्ष भित्र ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ । विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो । वि’वाह पछिको परिवर्तित दैनिकी र जीवनशैलीका कारण शरिरमा थुप्रै हर्मोनल चेन्ज हुने गर्दछ । यो तौल बढाउनका लागि जिम्मेवार हुनसक्छ
जीवन फेरीएसँगै कृष्ण र रुपा खुशी छन्, दुवै हात नभएका कृष्णले आफ्नो दुस्ख पछि आएको सुखको कहानी सुनाउँदा धेरैका आँखा रसाए केही महिना अघि सम्म कृष्ण वली र रुपाको निकै मार्मीक भिडियो र कथा सामाजिक सजालमा सार्वजनिक हुन्थे । उनीहरुको जोडीलाई सहयोग गर्न हजारौं नेपालीले सहयोग गरे । अहिले उनीहरुको जिवन फेरीएको छ । उनीहरु अहिले दुईवाट तीन भएका छन् । रुपाले एक छोरालाई पनि जन्म दिएकी छन् । अहिले कृष्ण वली आफै हिड्न सक्ने भएका छन् । उनी आफु हिड्ने मात्र होइन अरुलाई सहयोग समेत गर्न सक्ने भएका छन् । हिमालय टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने जिवसाथी कार्यक्रममा यो चर्चित जोडी पनि पुगेको छ । उनीहरुले आफुहरुको प्रेम, जिवनमा परेको कठिनाई र अहिलेको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गरेका छन् । घटना २०७५ जेठ २५ को हो । रुपा काठमाडौँमा बसेर नर्सिङको तयारी गरिरहेकी थिइन् । कृष्ण पेसाले सिभिल इन्जिनियर । उनी एक कम्पनीमा का
चर्चित दोहोरी गायिका ज्योति मगरको काठमाडौंमा भव्य घर र लग्जरी कार, भन्छिन : घरज्वाँई बस्ने केटा खोज्दै छु कोही छ ? तर ……
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले काठमाडौंमा भव्य घर बनाएकी छिन् । कलाकारिता बाटै उनले काठमाडौंमा घर बनाएको कुरा पहिले नै बताएकी थिइन् । कोरोना महामारी शुरु भन्दा पहिले नै बनाइसकेको घरमा हाल उनी बस्दै आएकी छिन् । विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन् । काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनले तीन तलाको भव्य विशाल घर बनाएकी छन् । अविवाहित गायिका मगरले अब बिहे गर्ने इच्छा पनि प्रकट गरेकी छन् । उनले आफुले घरज्वाँई बस्ने दुलाह खोजिरहेको तर मन मिल्ने मान्छे नपाएको पनि उल्लेख गरिन् । रमाइलो गर्दै उनले भनिन् घर भैसक्यो अब घरजम गर्ने तयारीमा छु । ज्योती मगर विशेषगरी उनका गीत र भिडियो अनि समय समयमा दिने बयानका कारण प्रायः चर्चामा रहने गर्छन् । नेपाली समाजले उनका धेरै गीतहरूलाई पाच्य मान्दैन । दशकभन्दा लामो समयदेखि कलाकारीतामा स
विष्णु माझिको भर्खरै सार्वजनिक भएको गीति कोसेलि चरि जेलैमाको यतिबेला चौतर्फी नै एकदमै चर्चा परिचर्चा छ ।उक्त गित विष्णु माझिको आफ्नो निजि जिवनसग मेल खाएको भन्दै धेरेले टीका टिप्पणी पनि गरेका छन् । विष्णु माझिलाई उनका श्रिमान सुन्दरमणि अधिकारिले जेलमा राखे सरह नै उनलाई राखेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।विष्णु माझीका सामाजिक संजालमा पनि एकदमै कम तस्बिरहरु छन् ।उनका गीति कोसेलिहरु बेलाबेला आउने गरेपनि उनी सार्वजनिक स्थानमा धेरै समयदेखि नआएको र गुमनाम भइ आफ्नो जीवन बेथित गरिरहेकि छिन् । विष्णु माझी बहुचर्चित र एकदमै लोकप्रिय र नेपाली संगित क्षेत्रमा सधै अमर रहने नाम हो ।उनको जिवनको बारे सधै चर्चा हुनेगर्छ र सबैले आ-आफ्नै तबरमा आकलनका हिसाबमा टीका टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।अहिले सार्वजनिक भएको उक्त गितमा धेरै मन छुने टिकटकहरु समेत बनेका छन् । हेर्नुस् भिडियो सामाग्री साभार : mountain media
प्रचण्ड,माधब जस्ता कठ्ठाेर कम्युनिस्टहरु एक भए देश बन्छ : विप्लव
काठमाडौँ । देशको राजनीति झन्झन् सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती संसद्‌वादी दलहरू देश र जनताको स्वार्थमा भन्दा आआफ्नो पार्टी र गुटगत स्वार्थका लागि अमिबाजस्तै कहिले जोडिने र कहिले फुट्ने गरिरहेका छन् । दलाल संसदीय व्यवस्थाका असली उत्तराधिकारी अर्थात् मसिहा भन्न मिल्ने र संसदीय व्यवस्थामा संसरभरका विकृति–विसङ्गति प्रवेश गराएर देशको राजनीति अस्थिर बनाइराख्न खप्पिस शेरबहादुर देउवाको पुनरागमनका केही दिनमै अध्यादेशबाट नेकपा एमालेलाई फुटाइएको छ भने फुट र जुटको कुनै गणना नै नहुने इतिहास बोकेको मधेसवादी दल जसपा पनि टुक्रिएको छ । केपी ओलीले आफू सरकारमा हुँदा जुन पात्र र विधिलाई प्रयोग गरेर अध्यादेशमार्फत तराईबासी दललाई फुटाउन, सांसद अपरहण गर्न, केही सांसद आफ्ना पक्षमा पारेर बहुमत कायम राखिराख्न र आवश्यकताअनुसार आफैँ पनि पार्टी फुटाउने अभ्यास गरेका थिए, देउवाले त्यह
मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु कोही छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ।
नेपाली रँगमञ्चमा आ आफ्नै भविष्य बनाउन तल्लीनहरूको भिडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र परिचय बनाउँदै गरेकी पछिल्लो समय मिडिय माझ निकै चर्चामा रहेकी मोडल हुन एलिना रायमाझी । २०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्। अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्। धुम थ्री र हिरो नं १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले धेरै म्युजिक भिडियोहरुको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। उनी अहिले दरबारमार्गमा रहेको आफ्नै क्युुुुुुइ रोधी नामक दोहोरी साँझमार्फत सांगीतिक यात्रामा जमिरहेकी छन्। यिनै सुन्दरीसँग प्रेम विवाह सांगीतिक क्षेत्र लगायतका विषयमा भवनाथ प्याकुरेलले लिएको अन्तर्वार्ता आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । पत्रकारले सोेधेको बिहेबारे केही सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नहरुमा विवाहबारे
वि.सं. २०७८ भाद्र १४ गते सोमवारकाे राशिफल, आज कृष्ण जन्माष्टमी, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
वि.सं. २०७८ भाद्र १४ गते सोमवार तदनुसार ई. सं. २०२१ अगस्ट ३० तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (गुँलागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:३४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:१७ बजे, चन्द्रास्त : दिउँसो १२:०३ बजे र चन्द्रोदय : मध्यरात्रीपछि १२:११ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:४१ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:२६ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:४६ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:३२ बजे, भाद्रपद कृष्णपक्षको अष्टमी तिथि, मध्यरात्रीपछि १२:१६ बजेसम्म, त्यसपछि नवमी तिथि, कृतिका नक्षत्र, बिहान ०६:३७ बजेसम्म, त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र, चन्द्रमा बृष राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), व्याघात योग, बिहान ०८:५२ बजेसम्म, त्यसपछि हर्षण योग, सुरुमा बालब करण दिउँसो ११:१४ बजेसम्म, त्यसपछि कौलव करण मध्यरात्रीपछि १२:१६ बजेसम्म, अन्तिममा तैतिल क
काठमाडौं। एक युवती दुईवटा ग,र्भा,शय र २ वटा योनीको साथमा जन्मिएको पाइएको छ । यसलाई मेडिकल विज्ञानको क्षेत्रमा सम्भवतः पहिलो केस मानिएको छ । दुर्लभ शारीरिक बनोटका कारण यी युवती गmर्भवती भएका बेला पनि उनको महिना,वा,री हुन सक्छ । पेन्सलभेनियाको फिलाडेल्फिया सहरकी २० वर्षकी पेज डिएन्जेलो नामकीयी युवतीमा ग,र्भाशयको दुर्लभ समस्या भएको पाइएको हो । डेलीमेलका अनुसार पेजको शरीरमा पूर्ण रुपमा काम गर्न सक्ने दुई प्रजनन प्रणाली छन् । यही कारण उनको एक महिनामा २ पटकसम्म म,हि,ना,वारी हुन्छ । यसको अर्थ उनी आफ्नो एक ग,र्भाश,यबाट ग,र्भवती हुन सक्छिन् तर त्यही समयमा उनको अर्को ग,र्भाश,यबाट महि,नावा,री पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनले आफू ग,र्भवती भएको थाहा नपाउन पनि सक्छिन् । यतिमात्र होइन उनी आफ्ना २ ग,र्भा,श,यबाट छुट्टाछुट्टै ग,र्भवती पनि हुन सक्छिन् । पेजको एक महिनामा २ पटक महिनावारी चक्र पूरा हुन्
आखिर किन ? मेरो लब पर्दैन त ? कोही छ मसग लभ गर्ने असल केटा…..
निशा राई टोलको एकजना शुभचिन्तक आन्टी प्राय सोधिरहन्छिन् ‘हैन तिमी बिहेचाहीँ कहिले गर्ने नि। म अलि फिल्मी पारामा स्टाइल मारेर जवाफ दिन्छु ‘मन परेको मान्छे पो लोग्ने बनाउने नत्र सिंगलै ठीक। एकदिन आन्टीले ममीलाई भनेकी थिइन् रे तपाईं की छोरी उ’त्ताउली छे टेढो टेढो जवाफ दिन्छे। हो, म उ’त्ताउली भएँ। किनकी जीन्दगीको महत्वपूर्ण निर्णय बिहेलाई कसैले शालीनतासँग जोडेर प्रश्न सोध्यो मैले त्यसको सिधा जवाफ मात्र दिएको हो। पछिल्लोपल्ट शितल दाहालले लेखेको मेरो बिहे किन हुँदैनरु लेखले मलाई असाध्यै छोयो। मैले पनि एकपल्ट जिस्क्याएर उनलाई सोधेकी थिएँ ए दिदी बिहे नगर्ने । कि धनी केटा खोज्दै हो । उनले हाँस्दै जवाफ फर्काएकी थिइन् ‘मजस्तो आफैं काम गरी खानेले के धनी केटा खोज्नुपर्‍यो। मलाई बिहे गर्ने केटा चैँ धनी हुन्छ बुझ्यौ। उनको जवाफपछि हामी मरीमरी हाँसेका थियौ। ठट्यौली गफको मिठो सन्देश असाध्यै चित्तबुझ्दो थ